ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ Key ကိုကူးယူခြင်းစက် မှအရည်အသွေးမြင့် Key ကိုကူးယူခြင်းစက် ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan Key ကိုကူးယူခြင်းစက် ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - GL-888A
စက် duplicating multi-functional keys ကို, ကို double-တဖက်သတ် grooved keys တွေကိုအမျိုးမျိုးတို့ကိုကူးယူနိုင်ပါတယ်။
4 လမ်း vise 100mm key ကိုနှစ်ချက်ဘက် grooved key ကိုမဆိုအမျိုးအစားမှမကုန်မှီတိုင်အောင်ကျင်းပရန်သင်တို့အလိုရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်။
အ vise ၏အထက်ပိုင်းနှင့်အောက်ပိုင်းနှစ်ဦးစလုံးအပိုင်း 110mm keys တွေကိုနှင့်မျှမတို့အပိုအဒက်လိုအပ်ကြောင်းအထူး / ပုံမှန်မဟုတ်သော keys ကိုပွား။ ထွ။ semi-မြို့ပတ်ရထားသော့ Square ကိုသော့က Round ရိုးတံအဓိကသော့ချက်။
ရှုထောင်: 360 မီလီမီတာ (W) * 310mm (ဃ) * 240mm (H)
ဘ 20 ကီလို
GW 22 ကီလို
Meas ။ 2.48 CUFT
မော်တော်: လူပျိုအဆင့်, 1/5 HP
110V သို့မဟုတ် 220v, 50 Hz သို့မဟုတ် 60 Hz
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.keymachine.com.tw/my/key-copying-machine.html
Copy ကူး Key ကိုစက်
အကောင်းဆုံး Key ကိုကူးယူခြင်းစက် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက်သင်သည် Key ကိုကူးယူခြင်းစက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ၊ OEM နှင့် ODM ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ခုမှ
ရွှေဘီးလက်ျာရထားနှင့်လက်ဝဲဘက်တဦးတည်းထိန်းချုပ်ထားငယ်လေးအဖြူလက်ကိုင်ကိုထိန်းချုပ်ထားနှင့်အတူအထူးဒီဇိုင်းနှစ်ခုအလျားလိုက်ရွေ့လျားရထားဘီး, တစ်ဦးချင်းစီရထား၏လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်:ရှုထောင်: 360 မီလီမီတာ (W) * 310mm (ဃ) * 240mm (H)ဘ 20 ကီလိုGW 22 ကီလိုMeas ။ 2.48 CUFT မော်တော်: လူပျိုအဆင့်, 1/5 HP110V သို့မဟုတ် 220v, 50 Hz သို့မဟုတ် 60 Hz
Key ကိုဖြတ်တောက်ခြင်း Tools များ
ဒီထုတ်ကုန်ဟာသံမဏိဓါးပစ္စည်းကိုတပ်ဆင်ထားကို၎င်း, အခြေခံနှင့်အတူနေသည်။ အားလုံးခလုတ်များကိုကားနှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ် keys တွေကိုအပါအဝင်, အဖြတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ prompt ကိုနှင့်အကျိုးရှိစွာ tool ကိုနှင့်ထုတ်သော့ဖွင့်တဲ့အကောင်းဆုံး tool ကိုဖွင့်။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်:NW0.5KgGW0.55Kg
လွယ်ကူသော Operating, ရိုးရှင်းသောပုံစံလက်စွဲစက်။ နှစ်ဆတဖက်သတ် keys တွေကိုအပါအဝင်သော့ချက်အလွတ်၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုး Clamp နိုငျသော4လမ်းမေးရိုး။ High Speed​​ သံမဏိတစ်ခုတည်းထောင့်ရှုးတပ်ဆင်ထား။ ဘောလုံးကိုသည်းခံခြင်းနှင့်အတူဘူးသီးကိုပြုပြင်တာတွေတင်းတင်းကျပ်ကျပ်သော့ကိုကိုင်ဖို့ကူညီနိုင်သည်။ တိကျသောအမြင့်, အဆကိုကယ်တင် & ထိရောက်မှုခြီးမွှောကျ။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်:ရှုထောင်: 300 မီလီမီတာ (W) * 215mm (ဃ) * 320mm (H)ဘ 14 ကီလိုGW 16 ကီလိုMeas ။ 2.48 CUFT မော်တော်: လူပျိုအဆင့်, 1/4 HP, RPM 1720110V သို့မဟုတ် 220v, 50 Hz သို့မဟုတ် 60 Hz
ဒီစက်ကို 12V ကား charger ကိုလျှပ်စစ်မီးနှင့်တကွ, အလုပ်ထုတ်တင်ဆောင်လာသောအဘို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာအာဏာကိုပြဿနာသူစိမ်းတစ်ယောက်လိုအပေါ်စိတ်မသက်သာဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း, အားပြန်သွင်းနိုင်ဘက်ထရီနှင့်အတူရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမျှအပိုဆက်စပ်ပစ္စည်းလိုအပ်ပါသည်စတာတွေကို double ဘက် groove သော့, ကားသော့, ဆိုင်ကယ်သော့မြား, မဆိုအမျိုးအစားအပါအဝင် keys ကို, အပေါငျးတို့သအမျိုးအစားများကိုကူးယူနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ 4-နည်းလမ်းများ vise 128mm key ကိုမှမကုန်မှီတိုင်အောင်ကျင်းပရန်သင်တို့အလိုရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်။ V ကိုအမျိုးအစားဖြိုက်နက်ရှုးတပ်ဆင်ထား။ နိုင်လွန် Brush တပ်ဆင်ထား။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်:ရှုထောင်: 210 မီလီမီတာ (W) * 250mm (ဃ) * 160mm (H)ဘ: 8 ကီလို GW:9ကီလိုMeas ။ 0.8 Cuftမော်တော်: 110V သို့မဟုတ် 220v, 50 Hz သို့မဟုတ် 60 Hz12VDC